Practical Python For Beginners – PYROBOCITY
+959979568950 / sithuphyo@pyrobocity.org /
We create something new for better future
ဒီ Practical Python For Beginners course ကို စလေ့လာတဲ့သူတွေတွက်သာမက အခြေခံ သိပြီးသားသူတွေတွက်ပါ ရေးထားတာမို့ အခုပဲ ဒီcourse ထဲမှာ ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။
မိတ်ဆွေက Python Programming ကိုအခုမှစလေ့လာမယ့်သူလား?
ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့။ဒီ courseထဲမှာ practical python ဆိုတဲ့တိုင်း မိတ်ဆွေတွက်အချိန်တိုတွင်း လေ့လာနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ အဖြေထုတ်ပေးတဲ့ print() ကနေစပြီး အသုံးဝင်တဲ့အချက်ပေါင်းများစွာကို အချိန်တိုတွင်းလေ့လာနိင်မှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဒီ course က Python programming ကိုတော့ လေ့လာချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုလေ့လာရမယ်မှန်းသေချာမသိဘူးဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် သေချာ စနစ်တကျစီစဉ်ပေးထားတာမို့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ တတ်သင့်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဒီ courseထဲမှာ basic အပြင် ဒီထက်သေချာနားလည်နိုင်အောင် practical exampleတွေနဲ့သင်ကြားရမှာပါ။Basic တွေကလောက်တော့ online ကရှာဖတ်လို့ရတာပဲဆို မှားပါမယ် ဒီ course က မိတ်ဆွေကို ဘာတော့ဘယ်လိုရေးသင့်တယ် မရေးသင့်ဘူးဆိုတာကို ပြပေးမယ့်အပြင် လေ့လာရလုံးဝလွယ်ကူအောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတာကို ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ကျွန်တော်တို့ python ကိုအခြေံကစ လေ့လာရမှာမို့လို့ ပုံမှာပြထားတဲ့တိုင်း
MASTERING LISTS & TUPLES
စတာတွေကိုအဆင့်ဆင့်လေ့လာပြီး နားလည်ပြီဆိုမှ practical project တွေရေးရင်းပိုကျွမ်းကျင်လာအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
Practical Project 1-Build Web Spider to Scrape Channel Myanmar Website
ကျွန်တော်တို့ python basic တွေကို နားလည်လာပြီမို့ ဒီတိုင်းလဲရပ်နေလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ channel myanmar website ကနေ movie ရှာတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ practical project ကိုဖွဲ့ထားပါတယ်။
Website တစ်ခုကို ဘယ်လို request လုပ်မယ်
ပြီးတော့ ရလာတဲ့ response ကနေ လိုချင်တဲ့ data ဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲနဲ့
ကျွန်တော်တို့ အရင်သင်ခန်းစာတွေက သင်ခဲ့ရတဲ့ lecture တွေကို ဘယ်လိုပြန်သုံးရမယ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားမှာပါ။
Learning Threading And Scheduling
ကျွန်တော်တခါတလေကျ function တွေကို တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုrunဖို့ အဆင်မပြေတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့အခါကျ thread တွေကိုသုံးပြီး ဘယ်လို parallel run ရတယ်ဆိုတာကို ဒီသင်ခန်းစာမှာလေ့လာရမယ့်အပြင် thread တွေက အပြိုင် runနေတော့ သူတို့ကြား data ဘယ်လို share ရမယ်စတာတွေကိုလ့လာရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါတလေကျ တစ်ရက်မှာ တစ်ကြိမ် auto program ကို runခိုင်းတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှအလုပ်လုပ်စေချင်ရင် ဘယ်လို schedule လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ဒီsectionထဲမှာလေ့လာရမှာမို့ အချိန်မဆွဲပဲလာခဲ့ပါ။
Upgrade Practical Project 1 by using Threading and Scheduling
ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ မိတ်ဆွေ ကြိုးစားရမယ့်သင်ခန်းစာပါ။ရှေ့သင်ခန်းစာတွေက လေ့လာခဲ့ရသမျှကို ဒီသင်ခန်းစာမှာ ပြန်အသုံးချပြီး practical project 1 ကိုမြှင့်ပြရမှာပါ။အကယ်လို့ မိတ်ဆွေဘက်က ကြိုးစားရင်း အဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင် ကျွန်တော်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီး ဆက်ရေးလို့ရပါတယ်။
Learning GUI Development
ကျွန်တေ်ာတို့ ဒီ section မှာတော့ GUI Development Basic ကိုသင်ကြားရမှာပါ။
စစလာချင်း tkinter ကို မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီး widgets တွေဘယ်လို create လုပ်မယ်နဲ့ မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့တိုင်း ဘယ်လိုနေရာထားရမယ်ဆိုတဲ့ layout management ကိုလေ့လာရမှာပါ။ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ button click လိုက်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ event binding ကိုအလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ရှင်းပြထားပါတယ်။
Practical Project 2-Making Youtube Downloader GUI Application
ကျွန်တေ်ာတို့ GUI Development Sectionကနေလေ့လာခဲ့တာတွေကို practical project အနေနဲ့ Youtube Video Downloader ကိုတည်ဆောက်ရမှာပါ။ရှေ့သင်ခန်းစာမှာ သင်ခဲ့ရတယ့် လွယ်လွယ်လေးတွေက အသုံးဝင်ပြီး မိတ်ဆွေက python basics sectionက သင်ခန်းစာတွေကိုပါ နားလည်တယ်ဆိုရင် ဒီsectionက project ကိုအလွယ်တကူအဆင့်မြှင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Learning Computer Vision Basic
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် page မှာစိတ်ဝင်စားကြတယ် တင်ပေးပါဆိုပြီး ပြောနေကျတာတွေ့လို့ ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီ section မှာတော့
Drawing On Image
Find Object With Color
စတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို အဆင့်ဆင့်လေ့လာပြီး လေ့လာထားရာကနေ practical project ဆောက်လို့အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။Computer Vision ကခက်တယ်ဆို ဒီ section ထဲက လွယ်လွယ်လေးတွေသုံးပြီး ဘယ်လို virtual music player ဆောက်သွားလဲဆိုတာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Practical Project 3-Make Your Own Virtual Music Player
ကျွန်တော်တို့ ဒီ practical project3မှာ video ထဲကတိုင်း ရှေ့ section က သင်ခဲ့ရတာများကို အသုံးချပြီး ကျွန်တော်တို့ contour တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တိုက်သွားတာနဲ့ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ music ကိုဘယ်လို ထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတာကိုလေ့လာရမှာပါ။Thank You.
အခုပဲ Facebook Page ကို ဆက်သွယ်ပြီး enroll လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Click Here To Contact
Practical Python For Beginners Online Course ထဲမှာ ဘာတွေလေ့လာရမှာလဲ?
BUNDLE 1-Price 50000 Kyats
Using Interactive Shell
Getting Input From User
How to access command line arguments and how you should access it
What is function and why we use it
your first function program
What is list
Working listh with list Indexes
Working List With For Loop
Basic List Program
What is tuples and working with tuples
What is Dictionary
What is different between List & Dictionary
Dictionary Comprehension,Using Dictionary,Merging Dictionaries
Complete String Manipulation Guide
What is regular expression and why we use it
Understanding python regular expressions
Understanding ‘^’,’.’,’$’ signs
Understanding File Path
Why should you know ‘how to work with csv using python’
Working with built in csv library
Working with pandas for csv files
PRACTICAL PROJECT 1
Request ChannelMyanmar Website And Find Movie Which Rating Are Greater Than 6
Download Movie Images
Record Data In CSV File
Wrap It Up Together
Scrape & Crawl Multiple Pages
BUNDLE 2-Price 100000 Kyats
Everything Included In Bundle 1
What is multithreading and why we use thread
Your first thread program
Upgrade practical project 1 by using multithreading
SCHEDULING YOUR TASKS
Why we schedule our task
How to schedule your task
Understanding Layout Management
PRACTICAL PROJECT 2
Build Your Own Youtube Video Downloader
COMPUTER VISION BASIC
Practical Project 3
Making Your Own Virtual Music Player
Practical Python For Beginners-Full Bundle
Si Thu Phyo
Training Mnist Dataset To Recognize Hand Written Numbers
by Si Thu Phyo /
Predict Hand Written Digits
Introduction To Android Libraries For Beginners
by Min Thura Zaw /
Lambda Keyword In Python
Understanding while-else in python
© 2019 Pyrobocity.All rights reserved.